စတင်ပြုလုပ်ခြင်းမူဝါဒကကာတာလနိုင်ငံရေးကိုစပိန်: အစိုးရနှစ်ခုအကြီးအကဲများ၏ပထမဆုံးအစည်းအဝေးကို, တပြည်နယ် (Sanchez), အခြားဒေသဆိုင်ရာ (Torra)
စပိန်နိုင်ငံတွင်ထိရောက်မှုကစားသမားဒိုင်လူကြီး OR ကြားနေရှိခြင်းမဟုတ်ပေမယ့်တစ်ဦးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဘောလုံးကစားနေသည်
11 ဇူလိုင်လ 2018 Belz ကာတာလနိုင်ငံရေးကို 0
Sanchez 0,0Torra ။ ပြစ်ဒဏ်များမပါဘဲတစ်ဦးကလည်စည်း
ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးနှစ်ခု အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများ, ပြည်နယ်တဦးတည်း (Sanchez() က The အခြားဒေသတွင်းTorra), ဒါဟာပဋိပက္ခ cleavage မှဖြေရှင်းချက်တစ်ခုနိယာမပြီးစီးခဲ့မမူ Catalunya ၏ကျန် Espanaမအများကြီးလျော့နည်းဖွင့်လှစ် extension ကိုကာလ၌ extension ကိုစတင်အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတလက်ပေါ်တွင်သားကောင်ကစောင့်ရှောက်ရန်တွယ်ကပ်သည့်အတွက်ဆန္ဒခံယူပွဲမှကျူးလွန်ရမယ့်စွန့်လွှတ်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းမှတ်ယူရမည်ထင်ရနိုင် ကာတာလပိုင်နက်တစ်လျှောက်လုံးနှင့်အခြားသောအနေအထား, သင်တန်းကိုလည်းတှငျမှေးဖှားမည်ဖြစ်ကြောင်းသောစပိန်ရွေးကောက်ပွဲသန်းခေါင်စာရင်း, မှတ်ပုံတင်အားလုံးလူကြီးအတွက်ဖြစ်နှင့် / သို့မဟုတ် dual-နိုင်ငံသားများမှချုပ်ထားဖြစ်ပါတယ် ဘာစီလိုနာ, Tarragona, Lleida နှင့် Girona.
ဒါဟာအကြောင်းကိုမရှိတော့ဖြစ်ပါသည် မက်ဒရစ် သူ2ကြိမ်ချည်ထားကြသူအောင်ပွဲခံတခါတရံ 50 နေဖြင့်ကစားအားလုံးပွဲအတွက်ဘာစီလိုနာကအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ, ဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်အသင်း၏ရည်မှန်းချက်များအတွက်အခါရော်ဘာပွဲစဉ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးကြောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်စတင်ရန်, ဘာစီလိုနာ၏ 396 ဆန့်ကျင် 382 သွင်းယူကြပြီ အခြားသောလယ်ဂိုးသမားနှင့်သေး undefined လိုင်းများကိုခုခံကာကွယ်တဲ့သူကနိုင်ငံခြားကိန်းဂဏန်းများမရှိဘဲမူဝါဒ PORTERIAS အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ဒါဟာဆက်ဆက်မျှော်မှန်းချက်မှာ "အပျော်တမ်း" လူတွေကစည်းမျဉ်းဥပဒေထဲမှာအမှားထိန်းချုပ်ဖို့ crazily ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါကြောင်းမရရှိခြင်း၏၏ catcalls, ဒါမှမဟုတ် sleazy ဒိုင်လူကြီးရဲ့ပီပီထက်ပိုမိုအရေးကြီးလှသည်ဘယ်လောက်ဝေးထွက်ရှာတွေ့မှယနေ့သဘောတူညီမှုရောက်ရှိဖို့ကွဲပြားခြားနားသည်။ တစ်ချိန်ကသွားရောက်လည်ပတ်အသင်းဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသည့်ရပ်တည်ချက်မောင်းသောအကြောင်းတရားများကိုစေ့စေ့မေးမြန်းပြီး, ပြေစာထိုသို့အကြောင်းပြချက်ရှိလျှင်ဆန့်ကျင်ပရိတ်သတ်တွေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်ဖြင့်တိုက်ပွဲများသာမင်းမဲ့စရိုက်ဒေါသကြောင့်ရှောင်ရှားနေကြသည်မပါဘဲလိုအပ်သကဲ့သို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာပါလိမ့်မယ် အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်ရာစုကနေကျွမ်းကျင်သူသက်သေအထောက်အထားများကိုဆုံးရှုံးသည်မဟုတ်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများကမှန်သည်သို့မဟုတ်မရှိမရှိပြည်နယ်၏အမှန်တရားသိရန်တွန့်ဆုတ်လျှင်အကြောင်းကို malsonantes လူငယ်မလျော်ကန်သောအကငျြ့ဘို့ရာအရပ်, ဂုဏ်သတင်းကိုအခြားအစည်းအဝေး, မှုတ်ရန်ရည်ရွယ် နှစ်သင်း၏အစည်းအဝေးကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်ကမ္ဘာအနှံ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း, ဒါပေမယ့်တစ်ဦး "တရားမျှတကစား" ၏ဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှတူသောအမြဲရုံယနေ့တန်ဖိုးထားသင့်ဘယ်သို့သောအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ထားတဲ့စစ်သမိုင်း, ။
ကျနော်တို့အရင်ကတစ်ဦးအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာရန်လာဆိုရှယ်လစ်အယူအဆအထွေထွေအစည်းအဝေးတွင်အမှတ်တည်ထောင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ၏ panel ကိုအတူဝေမျှဆွေးနွေးအပေါင်းတို့နှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအကြားရှိသည်ဟု ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် ပထမဦးဆုံးအကာတာလဒဏ်ရာများမှာထားတဲ့အတွက်သူတို့ကကိုဖယ်ရှား, ဒါမှမဟုတ်တနည်းယခုအချိန်တွင်မှာတက်တူးထိုးနှင့်အတူသူမ၏တက်အောင်ဖို့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မှတဆင့်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာမသိမမှတ်ဘဲ, အပွင့်လင်းအတွက်အမာရွတ်ချင်ပါတယ်ရသောနှာခေါင်းသို့မဟုတ်ဘောလုံး, နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးနှစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်, ကြောင်းချုံးစဉ်အတွင်းလျှင် inadvisable နေမကောင်း "turmix" ကို "ပြည်နယ်" ကအတိတ်လွတ်လပ်ရေး၏ဖြစ်စဉ်ကိုဆန့်ကျင်သွားမည်သည့်သဲလွန်စကိုဖယ်ရှားသင့်ကြောင်း သိ. ကောင်းတဲ့လိမ့်မယ်စတင်ရန်ကြောင်းဖြေရှင်းချက်သတိပေးမယ်လို့ အများကြီးသစ်ကို Turf နှင့်ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူလယ်၏လယ်ပြင်တွင်အချို့သောအသစ်သောကစားသမားများအတွေ့အကြုံကြည့်ဖို့ရှိသည်မယ်လို့ရှိရာတစ်ဦး "ad hoc" ကိုလိုနီခေတ်နှင့် Anomaly reverse မှအခါသမယရှိခဲ့ပါတယ်, တတ်နိုင်လက်မှတ်တွေ၏စျေးနှုန်းဂိမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ အဘို့ထိုသူတို့အများအပြားပြီးသားအသက်နှင့်ပရိသတ်, တည်ငြိမ်သောအဖွဲ့ချုပ်ထဲမှာကွံအဝါရောင်အသစ်တစ်ခုနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုပင်စင်စနစ်က၎င်း၏ကျေးဇူးတင်စကားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ် lacitos, ပင်လယ်မှပိုမိုနီးကပ်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်ယူဆကြည့်ရှုပိုပြီးစျေးကြီးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းပိုကောင်း taxable လျော်ကြေးအပေါင်းတစ်ရှိပါတယ် တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားအတွက်နယ်စပ်ဥရောပ၏ကျန်ဖို့အာရှကုန်ပစ္စည်းများမှလုံခြုံ access ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လျှင်နောက်ဆုံးတော့အားလုံးညာဘက်စီးပွားရေးပြဿနာ .. ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သေဆုံးသူဆပ်ဖို့ရှိသည်သောမြေထဲပင်လယ်ရှည်လျားသောစင်္ကြံ ?.
တခါတရံသူကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကုန်ကျများနှင့်စျေးနှုန်းစိတျကူးထက်ပိုပြီးအရာတစ်ခုခုသည်ယနေ့မျှော်လင့်ထားပေမယ့်စဉ်းစားတွေးခေါ်, ဆင်ခြင်ခြင်းသည်။ ဒါဟာအားလုံးသည်းခံခြင်းနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပညတ်တရား၏အခြေခံနိယာမကျော်လွှားနိုင်သည်ကိုမည်သည့်အစီအစဉ်ကိုညှိနှိုင်းနေပါတယ်ခွင့်ပြုမပြုမီ, မပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းလုပ်လိုသူတရားသူကြီးများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
3, ဇွန်လ 2018 0
ဒီartículoTweet Share "သင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ဘယ်တော့မှသင်၏အသက်တာအတွက်တစ်ရက်အလုပ်မလုပ်ဖို့ရှိသည်" ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြုအမူသတ်မှတ်ကြပါလျှင် (ကွန်ဖြူးရှပ်) loners "ပေါ်တွင်ပေါ်လာဖို့ဖိတ်ခေါ် [ ... ]
30 နိုဝင်ဘာလ 2017 368
ဒီartículoTweetဟေတီပုန်းကွယ်နှင့်ဒိုမီနီကန်အစိုးရ parsimony လူမှုရေးမီးတောင်၏မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူကာရစ်ဘီယံကျွန်းထိခိုက်စေခြင်းငှါမျှဝေပါ။ အီးမေးလ်ထဲတွင်ညှိနှိုင်းရေးမှူးကျနော်တို့ရေးသားခြင်း www.solitariosinvisibles.org [ ... ]